အလင်းရောင်ကြယ်များ: February 2015
ယစ်မျိုးလိုင်စင် လေးသောင်းကျော် နှစ်စဉ်ခွင့်ပြုပေးနေဟု ဒုဝန်ကြီးပြောကြား
Byရန်မျိုးနိုင်On Sun, 2015-02-22 10:13Location နေပြည်တော်Issue No.No.622 Tuesday, January 13, 2015
လိုင်စင်ရ အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ယမကာမှီဝဲနေသူတစ်ဦး ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)
လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ယစ်မျိုးလိုင်စင် အရေအတွက် ၄၀,၀၀၀ ကျော်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
နှစ်စဉ် ယစ်မျိုးအစီအစဉ် အရ ၂၀၁၁ တွင် လိုင်စင်အရေ အတွက် ၄၁,၃၃၃ ခု၊ ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လိုင်စင် အရေ အတွက် ၄၁,၂၉၃ ခု၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လိုင်စင် အရေ အတွက် ၄၁,၂၆၃ ခု၊ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လိုင်စင် အရေ အတွက် ၄၁,၂၁၀ ခုတို့ကို ခွင့်ပြု ထားခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဒုဝန် ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်း က ဆိုသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/22/2015 01:31:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲများအမြန်ရပ်တန့်၍ နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်းရန် UNFC တိုက်တွန်း
Byငြိမ်းငြိမ်းပြည့်On Sun, 2015-02-22 10:13Location ရန်ကုန်Issue No.No.662 Sunday, February 22, 2015
စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ကလေးငယ်အချို့ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − ရိုက်တာ)
ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ MNDAA ကိုအသိအမှတ်ပြု ပြီး ဖြစ်ပွားနေသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အမြန်ရပ်တန့်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းရေးကို အမြန်ဖော်ဆောင်သင့်ကြောင်း ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC)က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ရက်တွင် အစိုးရအား တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/22/2015 01:27:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
(21-2-2015) သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင် ပြသထားသည့် ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲ မှတိတမ်းဓာတ်ပုံ များ
ဖုန်ကြားရှင် နေထိုင် တည်းခိုသည့် တဘက်နိုင်ငံမှ ဟိုတယ်
ကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိသူများအား
ဆေးဝါးကုသပေးသည့် တဘက်နိုင်ငံမှ ဆေးရုံ
လောက်ကိုင်ဒေသတွင် သိမ်းဆည်းရမိသည့် လက်နက်
များနှင့် ဝ တပ်ဖွဲ့မျာကိုင်ဆောင်သည့် လက်နက် အမျိုးအစား တူညီ
စခန်း နေရာများအား ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှ မြင်ရပုံ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/22/2015 01:25:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လောက်ကိုင်တွင် ဖြစ်နေသည့်တိုက်ပွဲများ ပြည်ပနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ပါက လက်မခံနိုင်ဟု UNFC ပြော........
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လောက်ကိုင်တွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများတွင် ပြည်ပနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟူသည့် စွပ်စွဲချက်များကို ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC က ငြင်းဆိုလိုက်ပြီး ထိုအခြေအနေမျိုး ပေါ်ပေါက်လာပါက လက်ခံမည်မဟုတ်ဟု UNFC တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောဆိုလိုက်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/22/2015 01:19:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ယခု လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲမှာ စစ်တပ်က အမြတ်ထွက်သွားတယ် ဒီလိုပြောလိုက်ရင် တမျိုးမြင်သွားမယ် ဟုတ်ကဲ့ ရှင်းပြချင်ပါတယ်
၁။ တပ်မတော် ကို ဘယ်ပြည်သူ မှ မထောက်ခံဘူးပြောတဲ့ ပါးစပ်တွေ ပိတ်သွားတယ် ။လက်ရှိ အချိန်မှာ ရဲရဲတောက်နေတဲ့ profile တွေကြားမှာ စစ်သားတွေ ပါသလို စစ်တပ်နဲ့ လုံးဝ မပတ်သတ်တဲ့ ပြည်သူတွေ အများအပြားဆိုတာ လူတိုင်းသိနေကြတယ် ။တချိန်က စစ်တပ်အပေါ် မကောင်းမြင် အောင်
၂။ လမ်းပေါ်ထွက်အော်နေတဲ့သူနဲ့ တကယ် စစ်တိုက်နေရတဲ့ စစ်သားတွေ ဘယ်သူက သူရဲကောင်းပိုဆန်သလဲ သိသွားကြတယ် ။ကျဆုံးတပ်မတော်သားတွေ ရဲ့ နောက်ဆုံးရတဲ့ ဆုလဒ် က သင်နဲ့ တပ်မတော် လုံးဝ မသက်ဆိုင်တော့ ပါဆိုတဲ့ အမိန့်ပြန်တမ်း တစ်ခုပဲ ။ဒါပေမယ့် မဆိုသလောက်လစာလေးနဲ့ အသက်ကို ပေးလှူနေကြတယ် ။
၃။ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာတောင် စစ်သတင်းထက် မဟုတ်တဲ့ သတင်းတွေ ကို ဦးစားပေးဖေါ်ပြနေတဲ့ မီဒီယာတွေ အကြောင်း သိသွားတယ် ။မီဒီယာ ဆိုတာ ပြည်သူတွေအတွက်သိသင့်တဲ့ သတင်းကို တင်တာ မဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမုန်းတီးမှုတွေ ငွေရပြီးရော တင်တဲ့ သတင်းတွေ အပေါ် သံသယ ဖြစ်လာကြတယ် ။
၄။ လူထု က လက်တလော အရေးကြီးနေချိန်မှာ သွေးမစည်းခဲ့တဲ့ ပါတီ တစ်ချို့ ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် သူတို့ ရဲ့ ရပ်တည်မှု ကို ပြန်သုံးသပ်ပြီးစဉ်းစားလာကြတယ် ။ကျနော်တတ်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် မှာ ကျောင်းသား
နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ် ။တပ်မတော် ကို ထောက်ခံတဲ့ သူတစ်ချို့နဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်ကို ထောက်ခံသူတစ်ချို့ ။ဆန်ကျင်ဘက်မှာ ရပ်နေတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဘယ်ဘက်က ရပ်တည်သင့်လဲ ဆိုတာ ကို သေချာ သုံးသပ်လာကြတယ် ။
၅။ အရေးကြီးလာချိန် အသက်နဲ့ အလောင်းအစားပြုနေရတဲ့ အချိန်မှာတောင် လှောင်ပြောင်နေတဲ့ လူတစ်ချို့ ကို အထင်သေးလာကြတယ် ။သူပုန်တွေသေချိန်မှာ ဝမ်းနည့်းပြပြီး တပ်မတော်သားတွေ သေချိန်မှာ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ပါးစပ်တွေ လှောင်ပြောင်နေတဲ့ ပါးစပ်တွေကို စက်ဆုပ်လာကြတယ် ။၆။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ စစ်အင်အားဘယ်လောက် အရေးပါလဲ ပြည်သူတွေ သိလာကြတယ် ။အရေးကြုံလာရင် ဘယ်သူက တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်လဲ သဘောပေါက်လာကြတယ် ။ကျဆုံးသွားတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမယ့် ရသွားတဲ့ အကျိုးအမြတ် အတွက်တော့ ကျေနပ်မိတယ် ။ကဲ စစ်တပ်ကို ပြည်သူ တိုင်းမချစ်ပါဘူးစစ်တပ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက်မရှိသင့်ပါဘူး။စစ်တပ်မလိုဘူးလို့ ဘယ်သူပြောဝံ့
— with နို ရာ, ဟန်အာ နီကာ, သန်း နိုင် and 17 others.
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/22/2015 01:16:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်စဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနေပြည်တော်၌ု
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်စဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနေပြည်တော်၌ု ယနေ့21-2-2015မှာပြုလုပ်ပါတယ်။အထောက်အထားတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကို အရင် ဖြစ်ရပ်တွေ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/21/2015 09:59:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
NNER က တင်သွင်းတဲ့ ပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ (ည)ဆိုတာသေချာကြည့် 
ပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ (ည) ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ ဆန္ဒပြတာတွေဖြစ်လာရင် လူ့အခွင့်ရေးနှင့် မညီဘူးလို့ ပြောကြဦးမယ်။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ အဲဒီလူ့အခွင့်အရေးဆိုတာက အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့နေတတ်တယ်။ NNER အနေနှင့် အမျိုးသားပညာရေးကို အလေးထားတယ်ဆိုရင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/21/2015 09:54:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဒို့ အရေး ဒို့ အရေးဟု သံယောင်ဝါးအော်ဟစ်နေသူများ ရှက်တပ်ပါစေ
လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဒို့ အရေး ဒို့ အရေးဟု သံယောင်ဝါးအော်ဟစ်နေသူများ
အခုလိုမျိုး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/21/2015 09:48:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နေပြည်တော်၊ ဥတ်္တရသီရိမြို့နယ် မကွေး (ကံပြား)လမ်းဘေးတွင် အမျိုးသမီး (၁) ဦးအားသတ်ပြီး အလောင်းအား ဓါတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ထားခဲ့ခြင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈ ) ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီ မိနစ် (၄၀) အချိန်ခန့်က နေပြည်တော် ဥတ်္တရ သီရိမြို့နယ် မကွေး(ကံပြား)ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ( ၄/၅) အနီးနေသူကိုဇေယျာဦး (၃၅) နှစ်ထံ တဲနီးချင်းနေသူ ဦးဆန်းဋ္ဌေးရောက်လာပြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/21/2015 09:36:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကဲ... ဝက်ဆိုဒ်ပေါင်းစုံမှာမဟုတ်ထာတွေဆိုပြီး တင်ပြီးထပ်ဖွလိုက်ကြပါဦး... ပြည်သူတွေပါလို့ဆိုပြီး...စစ်တပ်ကို အပုဒ်ချ ခြင်တဲ့ လေထဲကလောက်ကောင်တွေ
ဖော်ပြပါပုံများသည် ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်သူပုန်များကို ပစ်ခတ်၍
မိဘပြည်သူများမှ ပြည်သူများကိုသတ်ဖြတ်နေပါသည်ဟု ဝါဒဖြန့်နေ
ကြခြင်းအား လုံးဝ(လုံးဝ)မယုံကြည်ကြပါရန် အနူးအညွှတ်မေတ္တာ
ရပ်ခံပါသည်...သူပုန်များမှာ အရပ်သားအသွင်ဖြင့် ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်
ပြီး sniper များဖြင့်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်နေသောကြောင့် တပ်မ
တော်မှ သုတ်သင်ရှင်းလင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၄၄ထုတ်ပြန်ထားသော၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/17/2015 10:47:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဆောင်းပါးရှင် ဆရာ နေထွန်းနိုင် ရဲ့ တပ်မတော် ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုရင်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို Eleven မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်.....
Ye Kyaw Thura added3new photos.
ဆောင်းပါးရှင် ဆရာ နေထွန်းနိုင် ရဲ့
တပ်မတော် ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုရင်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို
Eleven မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်.....
Eleven ဟာ ကျနော့်ကို comment ပေးခွင့် ပိတ်ထားခဲ့လို့
ကိုယ့် wall ပေါ်မှာပဲ စတေးတပ် ရေးတင်ပါတယ်.......
ဆရာနေထွန်းနိုင်ဟာ တပ်မတော် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့
ဆောင်းပါးတွေကို အတော်ရေးသားသူလို့ ထင်မိပါတယ်......
ကချင်ဆရာမလေး နှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရစဉ်က သုံးသပ်ချက်ကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/17/2015 10:41:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လောက်ကိုင်တွင် သတင်းထောက်များပါသည့် ကြက်ခြေနီယာဉ်တန်းတိုက်ခိုက်ခံ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ရက်တွင် ကြက်ခြေနီဝန်ထမ်းများနှင့် အတူ သတင်းထောက်များပါ ပါဝင်သည့် ယာဉ်တန်းမှာ လောက်ကိုင်- ချင်းရွှေဟော်ကြား လုံထန်ရွာအနီး ပစ်ခိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံ-အီးပီအေ)
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/17/2015 10:17:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/17/2015 10:03:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ဘလုပ်ညွန့်ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ ၇၀ ကျော် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် ညပိုင်း ၇ နာရီခန့်တွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ဘလုပ်ညွန့်ကျေးရွာတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၇၀ ကျော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ၉ နာရီ မိနစ် ၂၀ ထိ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/17/2015 09:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
NLD ပါတီက ပြုလုပ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တစ်ရာပြည့် ဟားငါးကောင် အငြိမ့်ပွဲ ပျက်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/17/2015 09:52:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တပ်မတော်နှင့်အစိုးရ သစ္စာဖောက် လောက်ကောင်များ၏ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်များ
Maung Maung -https://www.facebook.com/profile.php?id=100009066705164&fref=ufi
Awngzet DuKachin -https://www.facebook.com/profile.php?id=100008854410170
Marta Fish -https://www.facebook.com/marta.fish.35?fref=ufi
Taung Gyi Tar -https://www.facebook.com/profile.php?id=100008461120169
Lahpai Hkun Awng-https://www.facebook.com/hkunaung.shadanhkunaung?fref=ufi
Mary Marip-Mary Marip
N'sin Galang- https://www.facebook.com/dawi.yawbawm?fref=ufi
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/16/2015 07:02:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သောင်းကျန်းသူ ဖုန်ကြားရှင် ဘဝပျက်လေပြီ ။
ဖုန်းကြားရှင် (လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ပစ္စည်းများ)
ဖေ ၁၅ ရက်နေ့ လောက်ကိုင်အခြေအနေ
ဖေ ၁၅ ရက်နေ့မှာတော့ စကခ(၁၆) တပ်များကတော့ တိုက်စစ်ကို တာဝန်ယူပြီး လောက်ကိုင်နယ်မြေကို လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ် ...
ရန်သူ့တပ်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှု ၃ ကြိမ် ရှိခဲ့ပါတယ် ... ရန်သူ့အလောင်း ၁၃ လောင်းနဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းများ၊ လက်တော့ ၄ လုံး၊ UTM များနဲ့ စိတ်ကြွဆေးပြား များ၊ ဘိန်းဖြူများကို သိမ်းဆည်းရခဲ့မိပါတယ် ...
ရန်သူများ ဆုတ်ခွာသွားသဖြင့် ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါရှင်းလင်းခဲ့ရာ ရန်သူအလောင်း ၅ လောင်း၊ လက်နက်များ ကို သိမ်းဆည်းရခဲ့မိပါတယ် ...
ရန်သူများသည် အရပ်ဝတ် အ၀တ်အစားများကိုသာ ၀တ်ဆင်လှုပ်ရှားနေပြီး လူထုအကြားတွင် ပုန်းခိုနေလျက်ရှိပါတယ် ...
လောက်ကိုင်မြို့ပေါ်တွင်လည်း မကြာခဏ ပစ်ခတ်မှုများ ရှိခဲ့ပါတယ် ...
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/16/2015 07:00:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကျောင်းသားတွေရဲ့ မူလတောင်းဆိုချက် ၁၁ချက်ထဲမှာ အချက် ၉အထိ သဘောတူညီမှုများ ရရှိခဲ့ပြီး
၁၁ချက်မှာ ၉ ချက် သဘောတူညီမှုရပြီ ...
ကျောင်းသားတွေရဲ့ မူလတောင်းဆိုချက် ၁၁ချက်ထဲမှာ အချက် ၉အထိ သဘောတူညီမှုများ ရရှိခဲ့ပြီး သဘောတူလိုက်တဲ့ ၉ ချက်စလုံးရဲ့ ပုဒ်မအလိုက်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုကိုတော့ လေးပွင့်ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့ အလုပ်အဖွဲ့ကနေ ဆွေးနွေးပွဲမှာပဲ ပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။
ပညာရေးအသုံးစားရိတ်ကို ၂ဝ% သတ်မှတ်ဖို့နဲ့ မသင်မနေရ အခမဲ့ပညာရေးကို အလယ်တန်းအဆင့်ထိထားဖို့ဆိုတဲ့ အချက် ၂ ချက်ပဲ ဆွေးနွေးဖို့ကျန်တော့တာမို့ တောင်းဆိုချက်တွေအားလုံး အပြီးသတ် သဘောတူညီချက် ရရှိဖို့ နီးကပ်နေပါတယ်။
အချက် ၁၁ချက်စလုံးကို သဘောတူညီချက်ရပြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/11/2015 07:26:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဖြစ်နေပါ့မယ် ညီမငယ်ရယ် ...
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/11/2015 07:04:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တာရွှေထန်ကိုစစ်ကူလိုက် နေတဲ့ လက်ရှိတိုက်ပွဲသတင်း
Thet Htet Myat Noe added2new photos.
လက် ရှိအ ခြေအ နေအရ တာရွှေထန်ကိုစစ်ကူလိုက် နေတဲ့
စကခ ၁၆ ကတပ် ရင်းတစ် ရင်းလုံးပိတ်မိနေပါတယ်
နောက်ထပ်တပ် ရင်းတစ် ရင်းက ကူညီကယ်ထုတ်ပေးဖို့ လိုက်သွားနေပါတယ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/11/2015 06:56:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဖုန်ကြားရှင် ခေါင်းဆောင်သော လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာ့ စစ်သည်တော် အချို့ ထိခိုက်စာရင်း
ခမရ ၅၂၂ ၏ ထိခိုက် ကျဆုံးစာရင်းကို ...
၁+၂၉ ဦး ကျဆုံး
၃+ ၄၄ ဒဏ်ရာရ ...
၃ ဦး ပျောက်ဆုံး ဟု ဖော်ပြခဲ့မိပါသည် ...
ထပ်မံ ရရှိလာသော သတင်းများအရ ...
ထိုအကျအဆုံး စာရင်းမှာ ...
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ရက်နေ့ တွင် ...
တပ်ရင်းများ၏ ထိခိုက်ကျဆုံး စာရင်းဖြစ်ပြီး ...
ခမရ ၅၂၂ ၏ ထိခိုက်ကျဆုံး စာရင်းမှာ ...
လက်ရှိ ၁၉၀၀ ချိန်တွင် ...
၂+ ၅ ဦး ကျဆုံး နှင့် ..
၅+ ၁၈ ဦး ဒဏ်ရာရခြင်းသာ ဖြစ်၍
အချို့ မှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း ..
တပ်ရင်း အသီးသီးမှ ...
တပ်မတော်ဆေးရုံ ( ပြင်ဦးလွင်) သို့...
သယ်ယူပို့ ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ...
သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည် ...
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/11/2015 06:51:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အင်္ဂါနေ့က ပုံမှန်ပြုလုပ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/11/2015 06:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 2/10/2015 01:37:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ယစ်မျိုးလိုင်စင် လေးသောင်းကျော် နှစ်စဉ်ခွင့်ပြုပေး...
(21-2-2015) သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင် ပြသထားသည့် ကိ...
ယခု လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲမှာ စစ်တပ်က အမြတ်ထွက်သွားတယ်...
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်စဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနြေ...
NNER က တင်သွင်းတဲ့ ပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ (ည)ဆိုတာသေချ...
လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဒို့ အရေး ဒို့ အရေးဟု သံယောင်ဝါးအေ...
နေပြည်တော်၊ ဥတ်္တရသီရိမြို့နယ် မကွေး (ကံပြား)လမ်းဘေ...
ဆောင်းပါးရှင် ဆရာ နေထွန်းနိုင် ရဲ့ တပ်မတော် ရဲ့ မဟ...
လောက်ကိုင်တွင် သတင်းထောက်များပါသည့် ကြက်ခြေနီယာဉ်တ...
NLD ပါတီက ပြုလုပ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တစ်ရြာ...
တပ်မတော်နှင့်အစိုးရ သစ္စာဖောက် လောက်ကောင်များ၏ ဖေ...
ကျောင်းသားတွေရဲ့ မူလတောင်းဆိုချက် ၁၁ချက်ထဲမှာ အချက...
ဖုန်ကြားရှင် ခေါင်းဆောင်သော လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွင်...